ဟန်နိုဗာ ကုန်သွယ်ရေးပွဲတော် ဖွင့်လှစ်၊ ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် မာကယ်က လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေး အ?? - Yangon Media Group
ဟန်နိုဗာ ကုန်သွယ်ရေးပွဲတော် ဖွင့်လှစ်၊ ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် မာကယ်က လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေး အ??
ဟန်နိုဗာ၊ ဧပြီ ၂၃
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း စက်မှုကုန်သွယ်ရေး ပြပွဲဖြစ်သော ဟန်နိုဗာကုန်သွယ်ရေးပြပွဲကို ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် အိန်ဂျလာမာကယ်သည် လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေး၏ အရေးကြီးပုံကို အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးချုပ် အိန်ဂျလာမာကယ်က ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲ၌ စကားပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံအများအပြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးချင်းအတွက် ပိုမို ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ဟာ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးကို တတ်နိုင်သမျှ လွတ်လပ်အောင် လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်”ဟု အိန်ဂျလာမာကယ်ကဆိုသည်။
ဂျာမန်အစိုးရသည် AI ခေါ် ဥာဏ်ရည်တုကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့် စီးပွား ရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဆက်သွယ်ရေးတွင် သုတေသနလုပ်ငန်းစွမ်းရည်များကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင်အား သာနေသောလုပ်ငန်းများတွင် ဂျာမနီနိုင်ငံသည် အမီလိုက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ငန်းများကို ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မည်ဟု မာကယ်ကဆိုသည်။
မာကယ်၏အဆိုအရ ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုသည် ၂ဝ၂၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတွင်း ထုတ်ကုန် (G DP) ၏ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ တိုးမြင့်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဧပြီ ၂၃ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထိ နိုင်ငံပေါင်း ၇၅ နိုင်ငံမှ ပြပွဲပြသသူပေါင်း ၅ဝဝဝ ကျော်သည် ဟန်နိုဗာစက်မှုပြပွဲတွင် အနာဂတ်စက်ရုံများနှင့် စွမ်းအင်စနစ်များကို ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။